'२.0'ले अहिलेसम्म कति कमायो ?
‘२.0’ले अहिलेसम्म कति कमायो ?
१५ मंसिर २०७५, शनिबार १७:०१
एजेन्सी । पहिलो दिन विश्वभर करिब सय करोड ग्रस कलेक्शन गरेको अक्षय कुमार र रजनीकांतको साइन्स थ्रिलर फिल्म ‘२.०’ले हिन्दी भर्जनमा दोस्रो दिन १८ करोड कमाएको छ । यससँगै साइन्स थ्रिलर फिल्म ‘२.०’ले बक्स अफिसमा सुखद शुरुवात गरेको छ ।
फिल्मले रिलिजको घरेलु बक्स अफिसमा पहिलो दिन २० करोड २५ लाख भारु कलेक्शन गर्दा दोस्रो दिन १८ करोडको व्यापार गर्‍यो । फिल्मले दुई दिनमा ३८ करोड २५ लाख भारु कलेक्शन गरेको छ । शनिबार र आइतबार फिल्मले कस्तो व्यापार गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
फिल्मले तमिल-तेलुगु र हिन्दी भर्जनको दुई दिनको नेट कमाई जोड्ने हो भने एक सय ११ करोड ७५ लाख भारु भएको छ ।
ट्रेड सर्कलका अनुसार फिल्मले पहिलो दिन एक सय १५ करोड भारुको वर्ल्डवाइड कलेक्शन गरेको थियो । यसमा भारतबाट ८५ करोड र बाहिरबाट ३० करोड व्यापार गरेको थियो । त्यस्तै फिल्मले चेन्नाई बक्स अफिसबाट पाँच करोड भारु कलेक्शन गर्‍यो । तमिलनाडु बक्स अफिसबाट पहिलो दिन २२ करोड कमायो भने दोस्रो दिन १६ करोड कमायो । तेलुगु भर्जनको कमाई दुई दिनमै २९ करोड भारु पुगेको छ ।
यो फिल्म रोबोटको दोस्रो भाग हो । फिल्म ‘२.o’ ६६०० हलमा रिलिज गरिएको हो । यसमा हिन्दीमा ३५००, तमिलमा २५०० र तेलुगुमा ६०० हल रहेका छन् । विश्वभरको रिलिज गरिएको हललाई यसमा थप्ने हो भने त्यो संख्या दश हजार ५०० पुग्छ । ‍